Unikelelwe ngendlu ugogo oneminyaka engu 84 | News24
Unikelelwe ngendlu ugogo oneminyaka engu 84
PHOTO:Nokuthula khanyile Kungesikhathi ugogo uThembani Mkhize (84) enikwa ngokusemthethweni okhiye bendlu yakhe entsha.
OSOMABHIZINISI baseMgungundlovu ngokuhlanganyela bakhele ugogo oneminyaka engu 84 ubudala indlu endaweni yase-Thembalihle.
Lendlu evulwe ngokusemthethweni ngoLwesihlanu inamagumbi amabili okulala, ikhishi kanye nethoyilethi lasendlini.
Lomcimbi wokunikezela ngokhiye kugogo uThembani Mkhize, ubuhanjelwe nawuSotshwebu we-ANC ePhalamende uMnuz Jackson Mthembu njengoba kungamavolontiya e-ANC anxenxe labosomabhizinisi ukuba kwakhelwe ugogo indlu.
Ugogo uMkhize obehlala endlini yodaka ewayo kusukela ngonyaka owedlule ebinengxenye evulekile ingena imvula uma kunetha manje usenendawo ethi yena.
Umzukulu wakhe uBonginkosi Mkhize uthe impilo isizoba ngcono kakhulu njengoba sekunomuzi omusha ikakhulukazi ngoba akekho osebenzayo endlini bonke babamba amatoho.
“Kulendlu endala ukudla bekonakala kungena namagundane futhi uma kunetha kungene amanzi. Sijabule kakhulu nengcindezi isizothi ukwehla, sesizokwazi ukuthi sithole namasenti sithenge nezinye izinto zasendlini ezishodayo.”
Ugogo uMkhize ezibongela uthe ujabule kakhulu ngendlu yakhe entsha, “Angive ngijabule, kulendlu endala bekugcwele izintuthwane namagundane, lapho bengilala khona ingxenye yodonga ibiqaqekile ifuna ukuwa. Ngiyambonga umdali ngokungipha uphahla.”
Usomabhizinisi onikele ngempahla yasendlini uMnuz Themba Njilo we-Nduduzo Funeral Home unxuse abanye osomabhizinisi ukuthi nabo benze umahluko emiphakathini abasebenzela ngaphansi kwayo.
“Ukube njengosomabhizinisi siyahlangana ngabe mukhulu umehluko esiwenza emiphakathini yethu, kufanele sazi ukuthi ngokubambisana singanqoba.”
UMnuz Mehmood Oumar ongumnikazi we-Parklane Linen onikele ngezinto zokwakha uthe wathinteka kakhulu ngesikhathi efika okokuqala ebona indlu ugogo abehlala kuyo.
“Ngathinteka kakhulu ngesikhathi ngifika emzini wakhe wodaka ngibona nendlela aphila ngayo yena nabazukulu bakhe. Ngabona ukuthi nakanjani kufanele kube khona engikwenzayo ukuguqula isimo sempilo yakhe.”